रवि लामिछानेलाई भेट्न लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकाल चितवनमा – PanchKhal Online
Home/समाचार/रवि लामिछानेलाई भेट्न लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकाल चितवनमा
पछिल्लो समय पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आ’त्मह’त्या प्रकरणमा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने प्र’काउ परे सँगै घ’टना झन् झन् गम्भीर हुँदै गइरहेको छ । देशका विभिन्न ठाउँ बाट रवि लामिछानेको समर्थनमा आम दर्शक, समर्थक सडकमा उत्रिएका छन् । यसै क्रममा लोकप्रिय वरिष्ठ गायक राम कृष्ण ढकाल अनुसन्धानको लागी हिरासतमा राखिएका रवि लामिछानेलाई भेट्न चितवन प्रस्थान गरेका छन् ।
जाँदाजाँदै उनले लेखेका छन् : “सत्य कहिले हार्दैन, यदि कदमकदाचित हार्‍यो भने त्यो सत्य होइन !!! सत्यको जीत हुन्छ रवि । निस्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान होस् ।” सालिकराम प्रकरणमा हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने , युवराज कडेल , अस्मिता कार्की ( रुकु) लाई प्रहरीले भोलि अदालत उपस्थित गराउँदैछन्, पोस्टमा’र्टम रिपोर्ट पनि चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दान बहादुर मल्लको हातमा परिसकेको छ
लामिछाने समर्थकहरूले आजको दिनसम्म पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न छाडेका छैन, रविको रिहाइ माग सहित दो’षीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । पुडासैनीले आ’त्मह’त्या गर्नु पहिले मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियोमा पत्रकार रवि लामिछाने सहितका अन्य दुई व्यक्तिको नाम लिएका कारण आ’त्मह’त्या गर्नु परेको उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रहरीले पत्रकार लामिछाने सहित अन्य दुई जनालाई प’क्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो पनी हेर्नुहोस्ः करिष्मा मानन्धर भन्छिन्ः रवि लामिछानेको पक्षमा आएका जनतालाई भेडो भनेको होइन (भिडियो सहित)
काठमाडौँ,२ भदौ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले गर्दा सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धर विवादमा तानिएकी छिन् । केही दिन पहिले सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेको स्टाटसको कारण उनले धेरै दर्शकहरूको गाली समेत खाइन् । उनले उक्त स्टाटस विवादित बनेपछी आइतबार फेरी अर्को स्टाटस लेख्दै त्यसलाई प्रस्ट पारेकी थिइन् । उनले आफ्नो भनाइ एउटा रहेको र आम दर्शक, सर्वसाधारणले अर्कै बुझेको भन्दै त्यसको खण्डन समेत गरेकी छिन् ।
यस्तो थियो उनले लेखको पहिलो स्टाटस्ः
“राज्यले गर्नुपर्ने कामकाज निजितवर बाट हुनु खतरनाक हुन्छ ! नत्र किन चाहियो संसद, संविधान, राज्य समयन्त्र ? यत्रो तिरो तिरी रहेको छौ । तपाईंहरुले नैतिकता न–गुमाएको भए यो समस्या आउने थिएन । अब गंगामा हात धुनेले आँट गरे । पहिल्यै भनेको थिए येस्तो स्वतन्त्रताले अराजकता निम्त्याउँछ । सानो देशको व्यवस्था र संबंधित निकायलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने कस्तो सरकार ? अब भोग्नुस ! भेडाहरु को कोलाहाल !-
तर अहिले नायिका मानन्धरले उक्त स्टाटस डिलिट गरि अर्को स्पष्टीकरण सहिको स्टाटस् लेखेकी छिन्;उनको पछिल्लो लेखमा अधिकांश कमेन्ट देशको गहना नायिका भएर शब्द चयनमा चुकेको भन्दै माफि माग्न अनुरोध गरेका छन् ।”
करिश्माको दोस्रो स्टाटस्ः
धादिङ स्थित पृथ्वी राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा ३०को मृत्यु दर्जानौ घाईते
सोलुखुम्बु घटनाबारे नेकपाले मुख खोल्यो, प्रकाण्डले निकाले यस्तो विज्ञप्ति